Hitondra ny laharana fahefatra i Naina ANDRIANTSITOHAINA, kandidà natolotry ny vovonana IRK ho an’Antananarivo renivohitra amin’ny fifidianana ben’ny tanàna araka ny antsapaka natao ny 23 septambra tetsy amin’ny OVEC Nanisana.
Toa izao manaraka izao ny vokatry ny antsapaka amin’ny laharana bileta tokana natao tetsy amin’ny OVEC Nanisana amin’ny fifidianana ben’ny tanàna eto Antananarivo Renivohitra.
Laharana bileta tokana : Fifidianana ben’ny tanàna (27 Novambra 2019)
Andriamatoa Naina Andriantsitohaina, ministry ny raharaham-bahiny teo aloha, mpandraharaha malagasy no kandida ho ben’ny tanana an’Antananarivo natolotrin’ny vovonana IRK eto an-drenivohitra.
Androany tolakandro no nanao fanambarana tamin’ny fomba ofisialy ny filatsahana ho fidiana ho ben’ny tanana Atoa Naina Andriantsitohaina teo amin’ny PKO Soarano. Olom-baovao, tsy mpanao politika, mpandraharaha, vonona ny hitondra ny fampandrosoana ho an’ny tanan’Antananarivo izy, raha zoina ny lahateniny. Ny fiovan’ny tanana an’Antananarivo Renivohitr’i Madagasikara no tanjony. Zanak’Antananarivo ihany no nalatsakin’ny vovonana IRK ho kandidany eto an-drenivohitra. Naina Andriantsitohaina, fantatrin’ny maro amin’ny maha mpandraharaha azy ary nitondra ny ministeran’ny raharaham-bahiny nandritrin’ny valo volana. Androany, nanao fanambarana izy fa hilatsaka ho kandida ho ben’ny tanana ny renivohitr’I Madagasikara. Ambetitenin’ity mpandraharaha Malagasy ity fa manana adidy amin’ny fanarenana an’Antananarivo izy. Manana andraikitra, ahatonga an’Antananarivo ho maha-te honina sy mampirehareha, raha ny fanambarany hatrany. Nanao velirano ho an’ny vahoaka izy androany noho izany. Tao aorinan’ny fanambarana tety amin’ny PKO Soarano, nihazo avy hatrany ny OVEC Nanisana ny kandida Naina Andriantsitohaina hametraka ny antotan-taratasy filatsahany ho fidiana ho ben’ny tananan’Antananarivo.
Mbola tsy voafaritra mazava ny fotoana hanatanterahana ny fifidianana ben’ny tànana.
Na dia tsy mbola fantatra mazava aza ny andro hanaovana ny fifidianana ben’ny tànana, efa mandindra ny asa ahafahana mamita ny lisim-pifidianana ny eny anivon’ny fokontany, toy ny ao Antetezanafovoany.
Nanamafy ny Ministry ny Serasera sy ny Kolontsaina omaly fa tsy hanova ireo fehin-kevitra voahangona nandritra ny fakan-kevitra momba ny lalàna mifehy ny serasera.
Anisan’ny fanovana nentina, ny fanovana ho ny anaran’ilay lalàna ho “loi relative à la Communication médiatisée” raha toa ka “code de la Communication médiatisée” izy teo aloha. Nasiam-panitsiana toy izany koa ohatra fampiakarana ho dimy ny isan’ny solontenan’ny orinasa fanaovan-gazety tsy miankina eo anivon’ny fahefana mpandrindra ny serasera na ny ANRCM raha toa ka telo izany teo aloha.
Ho entitra amin’ny fikajiana sy fitandroana ny fandaniam-bolam-panjakana ny filoham-pirenena Andry RAJOELINA
Entitra ny Filoham-pirenena ny amin’ny fitantanana sy ny fandaniana ny volam-panjakana eny anivon’ny ministera isan-tsokajiny ka tokony hampiharina hoy izy ny atao hoe : « Mercuriale des prix dans la gestion des marchés publics ».